घरमा तुलसीका साथमा रोप्नुहोस् यी ३ बिरुवा, चमत्कारीक लाभ मिल्नेछ
शनिवार ११ असार, २०७९
गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » घरमा तुलसीका साथमा रोप्नुहोस् यी ३ बिरुवा, चमत्कारीक लाभ मिल्नेछ
सोमबार ६ असार, २०७९
धार्मिक ब्यूरो । हिन्दू धर्ममा तुलसीलाई विशेष महत्व दिइएको छ । तुलसीलाई देवतासमान मानिन्छ र यसको पूजा गर्ने केही नियमहरू छन्।
तुलसी भगवान विष्णुको प्रिय हो । यस्तो अवस्थामा भगवान विष्णुको पूजा गर्दा तुलसीको अवश्य पूजा गरिन्छ । यसका साथै भगवान विष्णुलाई चढाइने प्रसादमा तुलसीलाई पनि समावेश गरिन्छ ।
तुलसीको बोटमा लक्ष्मीको वास हुने जनविश्वास छ । घरमा तुलसीको बिरुवा रोप्दा नकारात्मकता हट्छ । यसका अलावा तुलसीमा धेरै प्रकारका औषधीय गुण पनि पाइन्छ, जसलाई स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।
वास्तुका अनुसार घरमा सुख र समृद्धि ल्याउनको लागि तुलसीको बिरुवा मात्र पर्याप्त हुन्छ तर यसको साथमा अरु बिरुवा लगाउनुभयो भने दोब्बर फाइदा हुन्छ । त्यसैले यदि तपाईको घरमा पनि तुलसीको बिरुवा छ भने त्यसको साथमा केही अरु बिरुवा अवश्य रोप्नुहोस् ।
शमीको बोट– वास्तुका अनुसार शमीको बिरुवा लगाउनु निकै शुभ मानिन्छ । शमीको बोट शनिदेवसँग सम्बन्धित छ। शनिबार शमीको बिरुवाको पूजा गर्नाले शनिदेवको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ । यदि यो बिरुवालाई तुलसीको साथ लगाइयो भने यसको फाइदा दोब्बर हुन्छ ।
आजका चर्चित पोष्टहरु पढ्न यहाँ राखिएको हेडलाईनमा थिच्नुहोस् ।
अष्ट्रेलियामा नेपाली यौन व्यवसायमा संलग्न
बुहारीको बयान : ससुरा र देवर मिलेर मसँग सम्बन्ध राखे, देखेर विरोध गर्दा श्रीमानलाई सिध्याए
प्रेममा उमेर नपुगी शारीरिक सम्बन्ध भए बलात्कार नहुने उच्च अदालतको फैसला, जेलबाट छुटे प्रेमी
यसरी सुत्न नजान्दा हृदयघात र सुगर, प्रेसर : मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोईराला
लिङ्गको टुप्पोमा बस्ने सेतो चिज कति घातक छ ?
बाबु सेनाको जागिरमा जाँदा अंकल ममीको कोठामा सुत्थे, सहन नसकेर नाबालिग छोराले हत्या गरे
कालो धतुरो – भगवान शिवलाई धतुरो चढाइन्छ। कालो धतुरो बिरुवामा शिवको वास रहेको जनविश्वास छ । यस्तो अवस्थामा यो बिरुवा घरमा लगाउनु निकै शुभ मानिन्छ । कालो धतुरोको बोट तुलसीसँग रोप्दा भगवान शिवको विशेष कृपा प्राप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मंगलबार कालो धतुरोको बिरुवा रोप्न सक्नुहुन्छ ।
केराको रुख – घरमा केराको रुख लगाउनु निकै शुभ मानिन्छ । यसो गर्नाले घरको नकारात्मक उर्जा हटाउनुका साथै घरमा सुख–समृद्धि आउनुका साथै धन सम्वन्धी समस्याहरु हट्छ ।
तुलसीको बोटको छेउमा केराको बिरुवा लगाउनाले घरमा धेरै आशीर्वाद मिल्छ। ध्यान राख्नुहोस् कि यी दुई बिरुवा एक साथ रोप्नु हुँदैन, बरु केराको बोट घरको मुख्य ढोकाको दाहिने पट्टि र तुलसीको बोटलाई मुख्य ढोकाको देब्रेपट्टि राख्नु पर्छ।
सबैको जानकारीको सेयर गर्नुहोस !!
आखिर कसले पतिलाई भगवानको दर्जा दियो
चारधाम यात्रामा दाना-पानी नदिई काम लगाएर १७५ घोडा खच्चरको मृत्यु, मालिकले कमाए ९० करोड
शनिको गोचरका आज यी राशिले लापरवाही गर्नुहुँदैन : राशिफल / असार ९ गते, २०७९, बुधबार
शुक्र–बुधको महासंयोगले बनेको महालक्ष्मी योगले यी ३ राशिको भाग्य खुल्दै
असार महिनाको पहिलो प्रदोष व्रत कहिले हुन्छ ? २ घण्टाको यो मुहूर्तमा शिवको पूजा गर्नुहोस्
आज यी राशि भाग्यशाली : जान्नुहोस् तपाईको राशिफल / २०७९ असार ६ गते, साेमवार
जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउन सरकार लागेको भीम रावलको आरोपपछि धर्मालम्बीहरुको आयो मार्मिक भिडियो
मन्त्री आलेद्वारा प्रसिद्ध शक्तिपीठ बडिकेदारको पदमार्ग शिलान्यास
नेपालीको विवाह गर्ने उमेर घटाउँदै सरकार
यी ५ दुर्लभ योगका कारण आज यी राशिलाई लाभ : राशिफल / असार १ गते २०७९
भारतमा चरम धार्मिक हिंसा भड्किदै, मुस्लिम नेताहरुका घरमा प्रशासनले डोजर लगायो
नोट गन्दै गर्दा नगर्नुहोस् यी काम, माता लक्ष्मी रिसाउनुहुन्छ !
मिथुन संक्रान्ति १५ जुन, राहु शुक्र संयोग बन्ने, जान्नुहोस् देश र तपाईमा पर्ने असर ?
हिन्दुत्वका लागि भाजपा प्रवक्ताको पक्षमा नेपालमा निस्कियो विशाल जुलुस, नेदरल्यान्डपनि उभियो
नेपाललाई धर्मयुद्धतर्फ धकेल्ने प्रयास भयो : विश्वहिन्दु महासंघ
आँप खानेबित्तिकै यी खाने कुरा भुलेरपनि नखानुहोस् : डाक्टर भन्छन् विष समान हुन्छ
ड्राईभरले ब्रेष्ट पक्रियो, सरले दिइस् भने पास गराउँछु भन्यो त्यसपछि.. अभिनेत्री दिया मास्के
क्यान्सरसँग लडिरहेकी मिस इण्डिया अभिनेत्री महिमा चौधरीको अनुहारबाट ६७ सिसाका टुक्रा हटाइयो
क्याप्टेन मोनिकाको बहादुरी र सीपले १९१ यात्रुको ज्यान बच्यो, विश्वभर प्रशंसा
विज्ञानको अहिलेसम्मकै ठूलो चमत्कार : मृत्युपछि फेरी बचाउँने प्रविधि आयो
बीबीसीले नेपाललाई पनि भारतको राज्य भनेपछि…
१० पास महिलाले खेतलाई बनाइन् दुनियाँको आकर्षक केन्द्र : लाखौं कमाइ गुगलले समेत तारिफ गर्यो